Diyaaradaha Turkiga oo toogtay diyaarad Suuriya leedahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Diyaaradaha Turkiga oo toogtay diyaarad Suuriya leedahay
A warsame 17 May 2015 17 May 2015
Mareeg.com: Wasiirka Gaashaandhiga Turkiga, İsmet Yılmaz ayaa sheegay in ciidamada cirka dalkaas ay soo rideen diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah (Helicopter) oo ay leeyihiin ciidamada cirka Suuriya, taasoo la sheegay iney ku xadgudubtay hawada dhulka Turkiga.
Reuters (Wasiirka Gaashaandhiga Turkiga, İsmet Yılmaz)
Mr. Yılmaz ayaa sheegay in diyaaradda Suuriya ay ilaa 7 Meyl hawada suuriya ku socotay muddo 5 daqiiqo ah, kadibna lagu soo riday deegaanka Jylva Gozo ee ku beegan marinka Bab Al Hawa ee soohdinta Suuriya iyo Koonfurta Turkiga.
Labo diyaaradood oo ah nuuca F16 oo Turkigu leeyahay ayaa toogtay diyaaradda Helicopter ah ee Suuriya, waxaana dadka deegaanku sheegeen iney arkeen labada diyaaradood oo toognaya diyaadda kale, taasoo hawada ku burburtay.
Tv-ga dalka Suuriya ee ay dowladdu leedahay ayaa beeniyey in diyaaradda ay Turkidu soo rideen aheyd Helicopter, wuxuuna sheegay in diyaaradda la riday aheyd mid yar oo ah kuwa aan duuliyaha laheyn.
Xiriirka Turkiga iyo nidaamka Suuriya ee uu hogaamiyo Bashaar Al-asad ayaa ah mid aad u xun waxaana sanakdii 2012 dalka Suuriya lagu soo riday diyaarad uu leedahay Turkiga oo Suuriyaanku sheegeen iney gashay hawada dalkooda.
Diyaaradda Turkiga oo aheyd nuuca F4 ayaa 22/06/2012 ayaa markii ay toogteen ciidamada Suuriya, waxey ku dhacday badda Mediterranean, qeybta biyaha Suuriya, waxaana falkaas ceel dheer ku riday calaaqaadka labada dal.
Labo duuliye oo wadday diyaaradda la riday ee Turkiga oo la kala oran jiray Gokhan Ertan iyo Hassan Hussein ayaa la waayey, waxaana 4-July 2012 markab wax baara oo Mareykanku leeyahay meydadkooda ka helay gunta hoose ee badda Mediterranean.
Xog: Dagaalyahannada Khalaafada Liibiya oo u tahriibaya Yurub